Lockdown - Pejy fandokoana maimaim-poana ho an'ny ankizy
Mba hampifangaroana ny fanapahan-kevitrao amin'ny taona vaovao sy ny fanidiana - Zumba ao an-trano. Roa taona lasa izay no lasa hatramin'ny alim-pandihizana nifangaro tao Amerika Latina sy ny aerobika niditra tany Alemana.
Zumba ao an-trano - Sary avy amin'i Yerson Retamal avy ao amin'ny Pixabay
Mazava ho azy ny tombony: mampiofana rehefa maniry ianao ary mihetsika malalaka sy tsy misy teritery. Azo antoka fa tombony io amin'ny voalohany, rehefa tsy mifanakaiky amin'ilay an'ny mpanazatra akory ny fikorontanan'ny hip.
Tsy misy sarany miverimberina ihany koa ho an'ny fandraisana anjara amin'ny gym. Ny ankamaroan'ny fonosana dia miaraka amin'ny DVD manazava ny fototra sy ny dihy. Na mandefa azy fotsiny ianao.
Azonao atao aloha ny mametraka ny fototra amin'ny hafainganana. "Zumba ao an-trano - fanatanjahan-tena" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 2. Janoary 2021 7. Janoary 2021 Sokajy freetime sy fanatanjahan-tenaKeywords Vodin-tongony vavony, mihetsika, Fitness, Gym, fanapahan-kevitra tsara, Fanokana-monina, Fanatanjahantena, workouts, ZumbaFanamarihana 1 ny Zumba ao an-trano - fanatanjahan-tena fanatanjahan-tena